Qaxootiga ku dhaqan Dhadhaab oo codsi u diray Dowladda Fadaraalka | KEYDMEDIA ONLINE
Qaxootiga ku dhaqan Dhadhaab oo codsi u diray Dowladda Fadaraalka
Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool xerada qaxootida Dhadhaab, ee dalka Kenya ayaa Dowladda Fadaraalka Soomaaliya, ka dalbaday in ay arrintooda ku eegaan il gooni ah, kadib markii aysan dhag qalas u siin in muddo ah.
DHADHAAB, Kenya – Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Xerada Qaxootida Dhadhaab ee dalka Kenya, ayay soo wajahday hubanti la’aan la xariira mustaqbalkooda, waxayna walaac xooggan ka muujinayaan habdhaqanka Dowladda Kenya.
Qiyaastii In ka badan 240,000 oo ruux oo Soomaali ah ayaa ku dhaqan xeryaha Dhadhaab, hoggaamiyayaasha Xeryaha ayaana Dowladda Fadaraalka Soomaaliya, ka codsaday in mustaqbalka qaxootiga kala hadasho Kenya.
Maanta oo ku beegneyd Maalinta Qaxootiga Caalamka, ayay sheegeen shaqsiyaad u hadlay qaxootiga in aan laga dhigin xeryaha munaasabad ku aaddan arrinkaas, waxayna Soddon sano ka dib ka cabanayaan dan-darro iyo dayacaad baahsan oo soo food saartay.
Waxa ay sheegeen in tan iyo markii Madaxwenaha Soomaaliya loo doortay Farmaajo, aysan arkin Safiirka Soomaaliya ee Kenya, isla-markaana ay yaraatay fursadihii ay ka heli jireen Kenya iyo gacmo kale.
Waxa ay si adag Dowladda Fadaraalka ugu codsadeen in ay si taxader leh arrinkoda ugala hadasho Kenya, lana raadiyo gacan saddexaad oo sooo dhex gasha arrinka qaxootiga si uu uga madax bannaanaado arromaha Siyaasadda.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay si rasmi ah ugu gudbisay UNHCR inay xiri doonto xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma marka la gaaro 30-ka Juun ee 2022-ka, hayeeshee, Maxkamadda sare ee dalkaas ayaa is hortaagtay go'aanka dowladda, halka hay'adda UNHCR ay sheegtay iney sii wadi doonto wadahadallada ay arrintan kala yeelaneyso madaxa Kenya.